novembre 2016 - Page 2 sur 25 -
Radio « Mivantana »:HITONDRA RIVO-BAOVAO HO AN’NY MPIHAINO
Nanampy isa ireo onjam-peo eto Antananarivo ny onjam-peo tsy miankina vaovao antsoina hoe « Radio Mivantana » izay raisina amin’ny halavan’ny onjam-peo FM 97.8. Hitondra fomba fanao vaovao eo amin’ny tontolon’ny haino aman-jery ity onjam-peo vaovao ity, …Tohiny
Fandraisana ny Frankôfônia:FANDRESENA LEHIBE HO AN’I MADAGASIKARA
Ankoatra ireo andrim-panjakana, ireo mpandraharaha ara-toekarena, antoko sy fikambanana pôlitika isankarazany, ny mpanao gazety, ireo tanora sy ireo ankizy, ny tontolon’ny zava-kanto sy ny kolontsaina, dia isan’ny nahazo tombontsoa be dia be tamin’ny fisian’ny Frankôfônia …Tohiny
« NANKAIZA DAHOLO ! »
Faly ery ny haino aman-jerin’ny mpitondra Tetezamita mivondrona ao amin’ny MLE mitatitra an’ilay tenin’ny fahitalavitra « Tv5 Monde » hoe « mbola isan’ireo firenena mahantra indrindra i Madagasikara kanefa nahavita nandray tsara ny Frankofonia ». Dia mandrirotra an’izay …Tohiny
Fotoam-pahavaratra:HAMAFISINA NY FAHAIZA-MIATRIKA NY RIVO-DOZA
Takaitra mavesatra ho an’ny firenena ny tsy fahaizana miatrika ara-potoana ny fiavian’ny rivo-doza na ny voina vokatry ny toetry ny andro. Miovaova sy tsy azo refesina intsony ny hafanana sy ny hatsiaka ary ny hamafin’ny …Tohiny